Arts & Humanities » မြန်မာစာ မြန်မာစကား မြန်မာစာလုံးး	47
မြန်မာစာရယ်လို့ ပြောမယ်ဆို အရမ်းသိတဲ့ထဲ တော့ ကိုယ် မပါပါဘူးးး။ ဒါမဲ့ ခုလောလောဆယ် ဟို အက္ခရာတွေကို ဖြုတ်သင့်မဖြုတ်သင့် ငြင်းနေကြလို့ သူ့ အမြင် ကိုယ့် အမြင်ကို ပြောလို့ရအောင် တင်လိုက်တယ်။
ကြားဖူးတာက မြန်မာ စာလုံး/အက္ခရာ မှာ အကြီးအသေး ရှိတယ် ဆိုလား ဘာလားး ခု ဖြုတ်မဲ့ ဆိုသူကရော မြန်မာ စာ မြန်မာစကား မြန်မာ စာလုံး ဘယ်လောက် တတ်တုန်း ကျွမ်းကျင်တုန်းတော့မသိ။ ဖြုတ်ရေးမဖြုတ်ရေးထက် လုပ်ချင်တာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အရေးကို ကျနော်က ပိုမကြိုက်တာ။
ဒီကိစ္စမျိုးကျတော့ ကျုပ်တို့က ကွန်တစ်ဟုတ်တော့ဘူး လစ်လစ်ဖြစ်သွားဘီ ဆာဆာ ဘာမှသိဘူးးးး
အောင် မိုးသူ says: အခုက မူကြိုကလေးငယ်တွေပါပဲ ခဏဖြုတ်ထားခဲ့မှာပါတဲ့။ နောက်အတန်းတွေမှာ ထည့်သင်မှာလို့ ပြောတယ်။ ဒီအတိုင်းကြီး ဖြုတ်ပစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျတော့်အနေနဲ့ လက်ခံ နိုင်ပါတယ်။
ခင်ဇော် says: ဖြုတ်လို့ ဘာထူး လည်း စဉ်းစားမရဘူးး
အောင် မိုးသူ says: တကယ်တော့ မဖြုတ်စေချင်ဘူး
ခင်ဇော် says: ခရက်ဒစ် – ဦးကျော်နိုင်
ဂျက်စပဲရိုး says: ထင်မြင်ချက် မရေးရဲ မရေးရက်ပါ။
ခင်ဇော် says: ဗျည်း ၈ လုံး ပြဿနာ
kai says: ABCD ထဲက.. တခုခုကို ကလေးတန်းမှာ ဖြုတ်ပြီး… နောက်မှပြန်ပေါင်းသင်မယ်ဆိုရင်ကော ဖြစ်နိုင်သလားဟင်င်င်… ဖြစ်မယ်ထင်သလား…. ဟင်င်င်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: အဲဒီ သဘောပဲ လေ။
သင့်အေးရိပ် says: ဗျို့…သူကြီး.. A ကနေ Z အထိ အက္ခရာတွေထဲမှာ… မြန်မာ အက္ခရာ ဋဌဋဃဠ တို့လိုမျိုး..
ပါရင် ချန်မှာပေါ့…. .မြန်မာနဲ့ အင်းဂလိပ် မတူဘူးနော့…
အမေရိကားက ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်အရွယ် အမေရိကန်သားပေါက်လေးတွေ ကို ဋဌဋဃဠ ဆိုတာတွေကို.. ရေးပဲ ရေးခိုင်းကြည့်ပါအုန်း… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ၃၃ လုံးလုံး ခက်တယ်လေ
ခင်ဇော် says: ဘာသာစကား တစ်ခု မှာ စာလုံး အသုံးအနှုန်း တိုးအောင် ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ရမယ်ပဲ သိထားတော့
pooch says: သိလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး ပြောကြည့်ဆိုလို့ပါ မှားနေရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါ
ဖြုတ်တာကို လက်သင့်ခံပါတယ်လို့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကလေးငယ်လေးတွေကို အရွယ်နဲ့လိုက်အောင် ၀န်မပိအောင် သင်ယူဖို့ဆိုရင် စာစသင်တဲ့နှစ်မှာ အဲ့ဒီအက္ခရာ ၈ လုံး ဖြုတ်တာ ဆီလျော်ပါတယ်
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အေဘီစီဒီတောင်ab cdဆိုတဲ့ အသေးစာလုံးနဲ့ ABCD ဆိုတဲ့ အကြီးစာလုံးမှာ အသေးကိုစသင်ပြီး တလုံးကိုပဲ သေချာမှတ်သိပြီးမှ အကြီး ABCD ကိုသွားရတာပါ တပြိုင်ထဲနဲ့aA အသေးအကြီး ၂ ခုတွဲမှတ်ရင် ကလေးအတွက် ခက်ခဲပင်ပန်းလို့ စာကြောက်တတ်ပါတယ် အခုလည်း အလားတူပါ သူငယ်တန်း မှာ အခက်အက္ခရာ ၈ လုံးဖြုတ်ပေမဲ့ ပထမတန်းမှာ ဆက်သင်မှာဖြစ်ပြီး အတန်းအလို အရ ၁၂ တန်းအထိရောက်သွားမှာမို့ ဖြေးဖြေးချင်းညှိုရင်း ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတခုဆီ ဦးတည်သွားမှာပါ
နောက်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ သူငယ်တန်း ၁ တန်းပဲ ရှိတော့တယ် နောက်တခုက မြန်မာစကားလုံးတွေ မလိုအပ်ပဲ နှစ်လုံးဆင့်ဖြစ်နေတာတွေ ရှိပါတယ် တက္ကသိုလ် ကိုရိုးရိုးတန်းတန်း တက်ကသိုလ် လို့ရေးလည်း မှန်ပါတယ် နှစ်လုံးဆင့်တဲ့သဘောက ပါဠိစာကို အားကျလို့ လှစေချင်လို့ တုသုံးတာပါ အဓိပ္ပါယ်တူပါကြောင်း ( အဓိပ်ပါယ် ရေးရင်တွေ့ပြန်ပြီ )
ပါဠိစာဘယ်ကလာတယ်ထင်လို့လဲဟင် တော်ပါပြီ ဆက်ပြောရင် ပြီးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး အဓိကကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့အရွယ် မှာ သူနဲ့သင့်တော်ဆီလျော်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို အမှန်တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းနဲ့ လိုတိုးပိုလျော့လုပ်ယူရမှာပါ သို့သော် ရှေးမူမပျက်ချင်တဲ့သူနဲ့ အပြောင်းအလဲကိုသွားချင်တဲ့သူနဲ့ နေရာတကာ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမှာမို့ ဒီကိစ္စကလည်း ဒီလိုပဲ ငြင်းရင်းခုန်ရင်း သွားပါလိမ့်မယ်
ခင်ဇော် says: အာ့လို ညှိ ယူကြေး ဆို ဂလိုသင်ရင် ကောင်းမယ်။
pooch says: ကနဦးသင်ကြားမှုအတွက် ကလေးကိုသိသင့်တာပဲ မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ ဆိုလိုရင်းပါ
အခုလတ်တလောတော့ ဘာတွေ နားလည်မှုလွဲနေလဲတော့ မသိဘူး လိုင်းပေါ်မှာ အုန်းအုန်းကိုထလို့ ကိုယ်နားလည်သလောက်ကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ
ကိုယ်ကလည်း ကိုယ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လျှောက်ပြောတာ လိုင်းပေါ်မပြောရဲလို့ ရွာထဲဝင်ရွှီးသွားတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: အမှန်တော့ သများ တရက် ထမင်း ၃ နပ်မှန်ဖို့ လောက် အရေးကြီးတယ်မထင်ပါဘူးး
pooch says: “ပညာရေးမှာ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြပြီး ကလေးတွေ အတွက်လို့ လွှဲချနေတာ ကာကွယ်နေတာကို နားမလည်တာ။”
သင့်အေးရိပ် says: ဟို အက္ခရာတွေကို
ထို့အပြင်…ထည့်သင့်ရင်…ထပ်ပြီး အသစ်တွေထည့်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
သင့်အေးရိပ် says: ဆိုတော့…ကျနော့်ကျေးဇူးရှင် ဆရာဇော်ဇော်အောင်…မကြာခဏ အော်ဟစ်ခဲ့သလိုပဲ…ပြောရမှာပဲ…
သဒ္ဒါဖွဲ့ထုံးတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး… လုပ်သင့်တာ ပြောသင့်တာကို သတ်သတ်မှတ်မှတ်(သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြီး) လုပ်ဖို့ ပြောဖို့…ဆိုင်ရာနယ်ပယ်က လူစွမ်းကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့… တော်တော်လိုနေပါတယ်။ အများညီ ဤကျွဲဖတ်နေရာက… ညီကို မညီလို့… ဤနဲ့ကျွဲကို မသုံးရ ဆိုတာမျိုး
.ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း ရွေ့လျားနေတာကြီးကိုတော့ဖြင့်…. တိုးတက်မှုလို့ မဆိုနိုင်ရေးချ မဆိုနိုင်။ ကျနော်ကတော့ ဒီအချိန်မှာ (ဒီအချိန်မှာ) မော်ဒန်/ပိုစ့်မော်ဒန်အယူအဆတချို့ကို လက်ကိုင်ထားနေသူမို့ … သဒ္ဒါဖွဲ့ထုံးတို့… ဘာသာစကား အက္ခရာတို့ကို…
ဂရုကို မစိုက်ရေးချ မစိုက်… .ဖြစ်ချိန်တန်ရင် ဖြစ်လာတဲ့ သဒ္ဒါဖွဲ့ထုံး(အက္ခရာတွေ)ကို.. သုံးချင်ရင်…ယူသုံးမှာဖြစ်ပြီး..
မစွန့်ပယ်ချင်တဲ့အခါများမှာလည်း..ပိုင်းစ စိပ်မွှာပစ်မှာ…ရယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: အကုန်သိပြီး မှ မသုံးချင်လို့ မသုံးတာနဲ့။
သင့်အေးရိပ် says: အဲ…
.ရောက်ကို မရောက်သေးဘူး မဟုတ်လားဟင်။ သုံးရမယ်.. သင်ရမယ်…(အပြီးအပိုင် ဖြုတ် ဖြတ် လိုက်ပြီလို့ မပြောဘူးလားလို့)
သူငယ်တန်းမှာ ခန ချန်ထားပြီး ပထမတန်းမှာ သင်ရမယ်… ဒါပဲ မဟုတ်ဘူးလား ။
ခင်ဇော် says: ဘာလို့ သူငယ်တန်းမှာ ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဖြုတ်မဲ့ဟာ အတော်များများကတော့ဘုန်းကြီးစာအုပ်ထဲပါတဲ့ စာလုံး
ခင်ဇော် says: စနစ်တကျ စမ်းစစ်ခြင်းမပြုခဲ့ပဲနှင့် အလျင်စလို ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်သည့် အပြင်
kai says: ငယ်ငယ်ကထဲက.. မြန်မာစာကိုချစ်လို့လေ့လာဖူးတာတွေထဲမှာ.. အဲဒီအက္ခရာ ၃၃လုံးက… အရေးကြီးတယ်..။
ခင်ဇော် says: ဒီ စာလုံး ၃၃ လုံး က အဓိပ္ပယ်မဲ့ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြန်ရှာအူးမယ်။
တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ အခြားဘာသာရပ်များကိုလည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗျည်းသင်ခန်းစာများကို ကျေညက်ပြီ ဆိုလျှင်ဖြင့် သင်ခန်းစာများ ဖတ်စာများကို လိုသလို ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ သင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် အဲဒီစကားလုံးတွေ အကုန်လုံးကို အသံထွက်မှန်အောင် မထွက်တတ်တဲ့သူ များပါတယ်…
အဲဒီလို မှားထွက်နေကြတယ်.. ဆိုတော့ ဒါတွေကို ပါဠိက လာတာတွေလို့ သတ်မှတ်ရင် မြန်မာစာမှာ ထားကို မထားနဲ့တော့.. အကုန်ဖြုတ်ပစ်…
မဖြုတ်နိုင်ဘူး.. ဒါကို မြန်မာဗျည်းတွေအဖြစ် လက်ခံထားရင် သူငယ်တန်းကတည်းက စသင်… ရေးနည်းပဲ မသင်မှာဆိုတော့ ဒါတွေကို ဇယားထဲမှာ ပြထားမယ့် သဘောပေါ့.. ဘာထူးလို့တုန်း… သုံးတာမသုံးတာ နောက်ထား.. သင်သာပေးလိုက်.. ဒါမှမဟုတ်လည်း သူငယ်တန်းမှာ ဘာရေးနည်းမှ မသင်နဲ့… အသံတွေကိုပဲ မှတ်မိအောင်သင်.. ဘာတွေမှန်းကို မသိဘူး… ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပဲ…
အောင် မိုးသူ says: သူပြောတာလည်း ဟုတ်တယ်
ခင်ဇော် says: Credit – သက္ကမိုးညို
လုံမလေးမွန်မွန် says: စဉ်းစားမိသလောက် ၂ နည်းရှိတယ် . . . ကလေးက အပြင်စာအုပ်တွေ လျှောက်လှန်ရင်း ဖြုတ်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို တွေ့လို့ ဒါဘာလဲ မေးရင် ဒါတွေ နောက်နှစ်မှ သင်ရမယ် . . .ခု မသိချင်နဲ့ဦး လို့ ဖြေ . . . မဟုတ်ရင် အဲဒီ ပါဠိက တိုက်ရိုက်ယူသုံးထားတာတွေအကုန်လုံးကို လုံးဝမသုံးတော့ဘဲ မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ မြန်မာစကားလုံး စစ်စစ်တွေကိုသုံး . . .ပါဠိလိုသိချင်ရင် ပါဠိဘာသာ သက်သက်သင် . . . ခုကျမှပဲ ကိုယ့်ဘာသာစကား ကပြားမှန်း ပေါ်တော့တယ်
ခင်ဇော် says: အချစ်လေးးး
ခင်ဇော် says: [ လက်ရှိ facebook မှာ ပျံ့နေတဲ့ မြန်မာစာသင်ရိုး
Nyo Win says: အေးပေါ့အေ ___ ကြီးမှလက်ပေးသင်ကြပေါ့……
ခင်ဇော် says: အဲလို သင်ရိုးပြောင်းတဲ့ သူတွေက ကလေး ဘာသာ အထူး တတ်မြောက်တဲ့သူတွေလား မြန်မာ ဘာသာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလား မသဲကွဲဘူးး သူငယ်တန်းကလေးတွေ သက်သာဖို့လားး
uncle gyi says: ဖြုတ်သင့်မဖြုတ်သင့်ပညာရပ်စကားတွေပညာရှင်များပြောကြပါကုန်
ခင်ဇော် says: သူငယ်တန်း ဆရာမတွေ သနားလို့ သူငယ်တန်းကိုပဲ ဖြုတ်မှာပါတဲ့။
မွသဲ ( 17082011 ) says: တကယ်တန်းကျတော့အစကတဲကဖြုတ်ပြီးသားကြီး။ သူငယ်တန်းမှာသင်နေရတဲ့
ခင်ဇော် says: အိပ်လော့, မြန်မာ !!!!
Tawwin Pan says: ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဲဒီစာလုံးတွေမရေးတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်ရေးပေးဖူးတာကိုတော့ မှတ်မိတယ်။ ဘယ်ကလေးမှလည်း ဒီစာလုံးတွေကို မရေးတတ်လို့ဆိုပြီး ကျောင်းမတက်ချင်ဘူးလို့ပြောတာလည်း မကြားမိပေါင်။ အချိန်တန်သူ့ဘာသာရသွားတာပဲကို။ ဘာတွေများ အဆန်းထွင်ချင်တယ်မသိ။
ခင်ဇော် says: ဘယ်တုန်းးက ကလေးးတွေ ကို ဒီလို ဂရုစိုက်တတ်သွားးလဲ မသိပါဘူးး ညီမလေးးရယ်..
ဆန်းးကြယ်ချက်…!! Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1163
hmee says: အရီးပြောတာ ဖတ်ချင်သေးတယ်။ အမတော့ ဦးပါ ဥပမာကို သဘောက မလိုသေးလို့ ဖြုတ်ထားပြီး လိုမှ ပြန်တပ်ရင် use to မဖြစ်လို့ ကသောင်းကနင်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုလည်း သင်ရိုးမှာပါပေမဲ့ ဆရာတွေက အရေးလေ့ကျင့်ရင် အဝိုင်းလေးတွေစသင်တယ် ခက်တာကို နောက်ဆံးမှသင်တာပါပဲ။။ စာဖြုတ်တာ မဖြုတ်တာထက် သင်နည်းကို အဓိက ထားသင့်တယ် ထင်တယ်။ သည်မှာ ကလေးတွေကို A ကိုနှုတ်တိုက်မအော်ရဘူး စာလံးလေးတွေ ပြပြီး စိတ်ဝင်စားအောင်သင်တယ်။ KG စာသင်ခန်းကိုကြည့်ရတာ စာသင်ခန်းနဲ့ မတူဘူး ကစားကွင်းလိုပဲ။ အဓိက က သင်ထောက်ကူတွေ ဖြည့်ပေးသင့်တာ။ ဒါလည်း နိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝမှုနဲ့လည်း ဆိုင်ပြနွရော။ ပြောရရင် အများကြီး ကိုယ့်ထက် တ တ်တဲ့သူတွေ ပြောတာ နားထောင် လိုက် မှတ်လိုက်ဦးမယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: မန်မာစာမှာ ပါဠိရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ဘယ်လောက်အားကောင်းသလဲဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာကနေ တိုက်ရိုက်မွေးစားထားတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အသံထွက်တွေကိုတောင် ပါဠိစာ ပြောင်းပစ်တယ် . . .
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဆောဒီးပါ
Kyi Lwin says: နည်းနည်းဝင်ပြောချင်ပါတယ်။
ခင်ဇော် says: ကိုကကြီးတို့ ရွှေဗျည်းရွာ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: တကယ်က အဆင့်မြင့်ရေးသားနည်းမှာ အများကြီး စည်းကမ်းသတ်မှတ်ရဦးမယ်။ စာကြောင်းနဲ့ စကားပြော ပူးတွဲရေးနည်းမှာ တော်တော်လုပ်ရမယ်။ အဲဒီနေရာမှာ အင်္ဂလိပ်စာက ပိုစနစ်ကျတယ်။ ကျမမှာ အဲဒီကိစ္စပြောစရာ များလွန်းလို့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ မောပြီး မပြောတော့တာပါ။